Go’aannadii Kismaayo Oo Saameynaya Jowhar – Kalfadhi
Go’aannadii Kismaayo Oo Saameynaya Jowhar
September 17, 2018 September 27, 2018 Kalfadhi
Kaddib shirkii Kismaayo ee iskaashiga dowlad goboleedyada ay ku hakiyeen wada shaqeyntii kala dhexeysey dhowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxa soo baxaya xiisado siyaasadeed u dhexeeya dowlad gobolleedyada dhexdooda iyadoona xildhibaannada iyo baarlamaannada maamullada Hirshabeele iyo Galmudug ay ka dhex billaabatey dood la xiriirta war murtiyeedii ka soo baxay shirkaas isla maarkaas-na madaxda maamulladani ay go’aan xiriirka loogu jaraayo dowladda dhexe ugu gaareen.
Hadabba qaar ka mid ah xildhibaannada Hirshabeelle ayaa ka soo hor jeestey go’aankii madaxda dowlad gobolleedyadu xiriirka ugu jareen dowladda federalka, halka qaar kale na ay taageereen go’aankaas isla markaas na ay ku tilmaaneen inuu ahaa go’aan sax ah oo ka jawaabaya danaha iyo baahiyaha dowlad gobolleedyada ku bahoobey iskaashiga dowlad gobolleedyada.
Xildhibaanada ka soo horjeestey go’aankaas xiriirka loogu jarey dowladda federaalka ee ka tirsan baarlamaanka hirshabeele ayaa ku eedeeyey madaxweynaha maamulka Hirshabeele mudane Maxamed Cabdi Waare in go’aanka xiriir u jarridda dowaldda uu kaligiis ku koobanyahay, isla markaana uusan la rashi kala sameyn baarlamaanka.
Xildhibaan Cali Cusmaan Ibraahim oo ka tirsan xildhibaannada baarlamaanka hirshabeele kana mid ah xildhibaannada ka soo horjestey go’aankaas ayaa sheegey inuusan la dhacsaneyn go’aankaas, lagalana tashan cod dheer-na ay ku diidan yihiin isaga iyo xildhibaannada kale.
Dhinaca kale xildhibaan Cabdirashiid Cabdixakiim oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeele ayaa isna taageerey go’aankii dowlad goboleedyada isagoona sidoo kale sheegey in ay sax yihiin eedeymo uu madaxweynaha maamulkaas uu u jeediyey dowladda federaalka dhowaan oo la xiriirey ammaanka deegannada maamulkaas uu ka taliyo.
Gudoomiyaha baarlamaanka Dowlad Goboleedka Hirshabeele mudane Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa asna ka soo horjeestey go’aankii maamul goboleedyada ee la xirirrey hakinta xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe isagoona sheegey in aanay jirin wax iska beddelay xiriirka ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad gobolleedka Hirshabeelle.
Dhinaca kale, xildhibaanada ku kala sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ee maamulka Hirshabeelle ayaa wada kulamo la sheegey in ay olole kalsoonida ugala laabanaayaan madaxweynha maamulkaas, iyadoona xildhibaannada ku sugan Jowhar ee xarunta maamulkaas ay guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas ugu baaqeen in si deg deg ah uu ku soo gaaro magaalada xilli baarlamaanka uu weli ku jiro fasax balse la filayo in kulan deg deg ah ay ka yeeshaan arrintaan. Xildhibaannada ayaa sidoo kale ugu baaqey madaxweyne Waare inuu hor yimaado baarlamaanka si su’aalo loo weydiiyo.
Ammaanka Dalka Oo Ah Ajandaha Kulanka Golaha Shacabka ee Maanta